हरेक देश को बारे मा छ जो मानिसहरू बस्ने यो । लागि ब्रस, तिनीहरूले एक प्रतिष्ठा भएकोमा खुसी, बहिर्गमन, हँसमुख छ र एक बिट को एक. मात्र ब्राजील मा एक उम्मेदवार ।
हरेक देश को बारे मा छ जो मानिसहरू बस्ने यो । लागि ब्रस, आफ्नो प्रतिष्ठा छ भएकोमा खुसी, बहिर्गमन, एक हँसमुख र केहि मानिस । मात्र ब्राजील मा गर्न सक्छन् उम्मेदवार को लागि चलान कार्यालय अन्तर्गत नारा»तपाईं के थाहा सांसद».
मेरो लागि वोट र म तपाईंलाई बताउन छौँ
जनसंख्या ब्राजील को एक छ लाख मान्छे । को परिणाम हो, एक मिश्रण को धेरै जातीय समूह । को गठन यो राष्ट्र, यूरोप, अश्वेतहरुको र भारतीय भाग लिए, यी समूहका प्रत्येक गर्नुभयो विभिन्न कुरा यस रोचक लिग, अब छ जो भनिन्छ वास्तविक ब्राजिलियन.
एक सुन्दर राष्ट्र को
प्राकृतिक र अनुग्रह, मुस्कान र एक क्रोधित स्वभाव बस जान सक्दैन. छैन केही लागि, बस एक महिना पहिले, को एक भए को, शीर्षक को चौथो सहभागी. खैर, विपरीत प्रचलित स्टीरियोटाइप, ब्राजील मा धेरै संग नीलो आँखा को सन्तानले छन् आप्रवासी जर्मनी देखि, जो मा मुख्य रूप बाँच्न देश को दक्षिण. एकै समयमा ब्राजील मा कुनै पनि गोरा छलफल भएको छ एक केटी जसको टाउको भन्दा लाइटर छ रैवेन गरेको भाग.
देशी भाषा को सबैभन्दा छ पोर्चुगिज
यो देखि एकदम भिन्न आफ्नो युरोपेली मा दुवै शब्दावली र उच्चारण. ब्राजिलका विदेशी भाषा बोलेको खराब । त्यसैले तपाईं छन् भने एक यात्रा योजना ब्राजिल, पोर्चुगिज पाठ. खैर, भाषा र सांस्कृतिक केन्द्र को पोर्चुगिज भाषा बोल्ने देशहरू बनाउन हुनेछ आफ्नो कार्य सजिलो छ । यहाँ तपाईं सिक्न हुनेछ ब्राजिलका पोर्चुगिज र प्राप्त सबै आवश्यक पर्यटक बारेमा जानकारी स्थानीय भन्सार र परम्पराहरूको. मुख्य विशेषताहरु को ब्राजिलियन र समयबद्धता. केही मानिसहरू पुग्न समय मा, र पनि टीवी शो लेट सुरु. र रही सही माप खरीद को समय मा पनि हुन सक्छ अत्यन्तै अनावश्यक. ब्राजिलका सोख छ, एक टीवी श्रृंखला र फुटबल । तिनीहरूले कहिल्यै साथ प्रसारण टेलिभिजन मा, गर्न रूपमा यति खोस्नु को दर्शक मनोरञ्जन । विशेष महत्त्व को लागि फुटबल मा सामान्य छ कि यसको यो अक्सर भनिन्छ दोस्रो धर्म को ब्राजील. ब्राजिलका राष्ट्रिय फुटबल टीम मात्र छ कि टीम मा भाग छ सबै को विश्व कप ल्याए र आफ्नो देश पाँच च्याम्पियनशिप । सामाजिक पक्ष को एक चिन्ह छ बलियो स्तरीकरण को ब्राजिलियन समाज, मा जो धेरै धनी मान्छे र गरिब सँगै बस्न मा नै शहर हो । खैर, यो कमी को धन सजिलो छ.
यहाँ भन्दा ब्राजील मा
धेरै मानिसहरू रुचि गर्न धेरै कमाउन छ, यो पर्याप्त छ लागि एक जीवनकालमा छ । ब्रस कि साबित भएको छ, तिनीहरूले सूची मा राष्ट्र ग्रह मा । किनभने द्वारा आयोजित एक सर्वेक्षण कम्पनीहरु संसारभरि देखाए भन्ने मान्छे को ब्राजील खुसी छन् । यो एक छ को उच्चतम दर को आश्चर्य, तर यो बाहिर लागे भनेर आनन्द को भावना छैन को डिग्री मा निर्भर राम्रो-हुनुको । कसले सोचेको थियो यो सूचीमा भनेर ब्राजिल किनारा फिजी, नाइजेरिया, हल्याण्ड, स्वीट्जरल्याण्ड, कोलम्बिया, फिनल्याण्ड, जर्मनी, आइसल्याण्ड र डेनमार्क. मोटर घर । लागि पूर्ण वा आंशिक उपयोग अनिवार्य छ मात्र भिडियो अनुक्रमित गर्न हाइपरलिकं
← डेटिङ साइटहरु पूरा गर्न महिला मेक्सिको मा खोजिरहेका विदेशी पुरुष - मान्छे
डेटिङ मेक्सिको मा राजकुमार को मेक्सिको →